Nlekota oru Archives - Ihe Ndị Ruuru Mmadụ & Ihe Osise site na PixelHELPER Foundation
22 nwere ike 2011
Onye na-eche ndị nche nche. Mgbasa ozi megide nyocha
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 22. Mee 2011
Ozi na-apụta ma na-agbasa n'ụwa niile kwa sekọnd. Tofọdụ akụkọ kwuru na ụwa yiri ka ọ na-agbanwe agbanwe karịa na mbụ. Ozi na-emetụta ndụ anyị. Anyị na gị ga-eburu gị kuru gị n'abalị. Na ebe n’obodo n’obodo nru ura na-eme nku ya. Onweghi ihe puru iche nke putara ihe nye anyi. Teknụzụ ọgbara ọhụrụ emeela ka ụwa pere mpe. Mana esemokwu mpaghara na ụwa niile yiri ka ọ na-eto. Ọtụtụ ajụjụ ndị ị ga - atụkwasị obi. Ihe omuma a bu ihe kwesiri ntukwasi obi ma na udo na oganihu na Germany ka odi adi. Nke a bụ kpọmkwem ebe ọrụ anyị malitere. Na njikọ mba ụwa, anyị na-emepụta ntọala ndị a pụrụ ịdabere na ya, mgbe ụfọdụ n'ihe egwu dị elu, n'ihi na ọ ga-ewe ogologo oge iji rụọ ọrụ nke ọma. Integer & na-eguzosi ike n'ihe siri ike na ichebe Germany.
Gbasoo ugbu a - maka ụwa mara mma!
TED Kwuo megide nche
State Surveillance: "NSA na Ụlọ"
na United Stasi nke America guzo n'elu mgbidi nke Embassy America na Berlin na ndị ọzọ ndị American Consulates na Germany, gụnyere Dusseldorf, Frankfurt na Hamburg. Ihe kpatara nke a bụ nnyocha nlelị na NSA na ọrụ nzuzo nzuzo nke America.
NSA na-akwado usoro nlele anya ya dị mkpa maka ịlụ ọgụ megide iyi ọha egwu. Ọzọkwa, ọ na-eme onwe ya ka o doo onwe ya anya site n'ikwu, "Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ị zoo, ị nweghị ihe ị ga-atụ egwu". N'ụzọ dị mwute, nyocha nke NSA na-aga n'ihu na njedebe nke ọgụ megide ụjọ. Ekwentị gị, Skype, oku Whatsapp nwere ike nyochaa, ọ bụ ezie na ịnweghị ihe jikọrọ ya na ndị na-eyi ọha egwu, na-eji "3rd Degree Friend" ụkpụrụ.
Tụkwasị na nke a, usoro nlekota oru a gbochiri nanị mwakpo 4. Ọ bara uru na nzuzo anyị maka nchebe doro anya na-emeghị eme? PixelHELPER ekweghị na ya, ọ bụ ya mere anyị ji malite mkpọsa a.
Ihe ịga nke ọma mbụ na nsonye 13, na-eme kwa izu na mgbasa ozi mgbasa ozi dị ukwuu:
Ọpụpụ nke onye isi obodo CIA kachasị elu.
Onye na-eche ndị nche nche. Mgbasa ozi megide nyocha April 21st, 2020Oliver Bienkowski